JIOI 2019 – Minisitra Tinoka Roberto: “Nahafa-po ny vokatra azontsika Malagasy” - ewa.mg
JIOI 2019 – Minisitra Tinoka Roberto: “Nahafa-po ny vokatra azontsika Malagasy”
News - JIOI 2019 – Minisitra Tinoka Roberto: “Nahafa-po ny vokatra azontsika Malagasy”
Noraisin’ny minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto, teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina,omaly, ireo federasiona nandray anjara nandritra ny lalaon’ny Nosy, andiany faha-10, natao tany Maorisy. Natao jery todika ny vokatra azon’ireo atleta malagasy nandray anjara, niisa 200 mahery. Noresahina koa ny valin-kasasarana hatolotra ireo nahazo medaly. “Afa-po tamin’ny ezaka nataon’ny mahery fo isika. Tena niezaka izy ireo ka mendrika homena fankasitrahana sy fanohanana”, hoy ny minisitra Tinoka Roberto. Voaresaka koa ny fomba handraisana ireo atleta sy ny lanonana momba izany, hahafahana maneho ny fankasitrahana. Nodinihina ny hahazoana vokatra tsaratsara kokoa hatrany. “Tokony hahasaro-piaro ny vokatra ary mila hatsaraina. Tsy misy ny tonga lafatra. Mila miezaka hahazoana fahombiazana”, hoy ihany izy.Notsofina rano koa ny Makis vehivavy, hiatrika ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika, taranja rugby, hatao manomboka ny zoma ho avy izao any Afrika Atsimo. Etsy andaniny, hanomboka tsy ho ela ny fampivondronana ireo atleta hiatrika lalao afrikanina, hanomboka ny19 aogositra izao any Maraoka.
L’article JIOI 2019 – Minisitra Tinoka Roberto: “Nahafa-po ny vokatra azontsika Malagasy” a été récupéré chez Newsmada.
Rugby vehivavy – «Tournoi de repêchage»: tsy tafavoaka ny Makis de Madagascar
Faharesena telo, tamin’ireo lalao telo natrehiny, ny vokatra azon’ny Makis de Madagascar vehivavy, nandritra ny “Tournoi de repêchage”, hiadiana ny tapakila hiatrehana ny “Lalao Olympika” (JO 2021), taranja rugby lalaovina olona fito. Fihaonana, notanterahina tany Monaco ny asabotsy sy omaly alahady.Araka izany, laharana farany ny Makis tao amin’ny vondrona C nisy azy. Tsy tafavoaka ny Makis ary namoy ilay nofinofy ho any Japon, hiatrika ny “Lalao Olympika”. Lojika ny voka-dalao, teo amin’ny fihaonana voalohany, nanamontsanan’i Frantsa ny Malagasy, tamin’ny isa mazava, 49 no ho 0. Baolina nentin-tanana fito, araka izany, ny vitan’ny Frantsay izay voatsara avokoa. Nanantombo teo amin’ny lafiny rehetra, na taktika na teknikan’ny mpilalao na tanjaka, ny Frantsay.Mbola lavon’i Hong-Kong ihany koa avy eo ny ekipam-pirenena rehefa niondrika tamin’ny isa 19 no ho 12. Lavo ihany koa teo amin’ny lalao fahatelo rehefa resin’i Kolombia, tamin’ny isa 12 no ho 7.Traikefa ho an’ireo mpilalao ny fandraisana anjara, tamin’ity. Ilaina ny haben’ny vatana, amin’ny fihaonana iraisam-pirenena fa tsy vitan’ny fahaizam-baolina intsony ka tokony mba efa hijery izany ny teknisianina sy ny Malagasy rugby raha te ho lasa lavitra ny baolina lavalava malagasy. TompondakaL’article Rugby vehivavy – «Tournoi de repêchage»: tsy tafavoaka ny Makis de Madagascar a été récupéré chez Newsmada.
Miisa 36 ireo naratra, vokatry ny fifanosehana tetsy Mahamasina, ny alarobia teo, mbola manaraka fitsaboana, ao amin’ny HJRA, hatramin’ny omaly. Raha tsiahivina, 16 ny maty tamin’ity tranga nampalahelo ity ka tsy ampy taona ny 10 amin’ireo ary nahatratra 100 kosa ny naratra, araka ny tatitra nataon’ity toeram-pitsaboana ity.Mbola mahakasika ireo niharam-boina tetsy Mahamasina hatrany, nisy ny fanafody natolotra sy ny fitaovana samihafa, handraisana sy hikarakarana azy ireo. Marihina fa efa misy ny fanafody sy fitaovana voaoman’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ny tranga toy ireny, saingy manampy izany izao fanomezana izao.L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Môtô tra-doza :: Lehilahy iray nivarina tany anaty hantsana
Ora maro taty aoriana vao hita ny loza nahazo ny lehilahy iray, 22 taona, nitondra môtô, teny Alakamisy-Fenoarivo, omaly hariva. Efa tsy nisy aina intsony izy. Handeha hitady lasantsy no nialany tao an-trano, teny Anosizato afak’omaly, ka tsy niverina intsony, araka ny loharanom-baovao. Olona sendra nitady akoho no nahita ny môtô sy ilay lehilahy efa tsy nahatsiaro tena intsony. Monina eny Anosizato ity tra-doza namoy ny ainy io. Raha ny fotoana nialany tao an-tranony dia tombanana ho afak’omaly alina no nitrangan’ny loza. Teo amin’ny fiolahana iray hiakatra an’Alakamisy, izay misy hady kely, no nahitana ny razana nihohoka tamin’ny sisin’ny rindrim-bato. Manambady sy manan-janaka roa ilay lehilahy. Omaly hariva ihany dia tonga teny Alakamisy ireo fianakaviany naka ny razana. Misy ny fanadihadiana ataon’ny Zandarimaria eny Alakamisy momba an’ity tranga nahafaty olona ity. L’article Môtô tra-doza :: Lehilahy iray nivarina tany anaty hantsana est apparu en premier sur AoRaha.
Hier matin vers 6 heures, une voiture de transport en commun a fait une sortie de route dans la route nationale 25. Ce taxi-brousse de marque sprinter reliait Fianarantsoa à Vangaindrano. Selon l’information de la gendarmerie, la voiture roulait à vive allure. Le conducteur a perdu le contrôle du taxi-brousse qui a fini sa course au fond d’un ravin. L’accident a fait un bilan de 13 blessés et ces individus ont été transportés d’urgence au CRDH Ifanadina. Trois mineures moins de 14 ans figurent parmi les 13 blessés. Des passagers ont pu regagner leur domicile après les premiers soins, tandis que d’autres restent toujours à l’hôpital pour une surveillance médicale. Les cas d’accident sur la route nationale sont devenus répétitifs et concernent en grande partie les taxis-brousse dans cette période où les routes sont ouvertes librement après confinement. A rappeler qu’avant-hier, sur la même route, à quelques kilomètres, un taxi-brousse qui a fini dans le ravin à Ranomafana, qui a provoqué deux morts et plusieurs blessés. Les gendarmes ont précisé que le conducteur était en manque de sommeil. Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre. Ces derniers n’arrêtent pas de sensibiliser les conducteurs des dangers de la route. Yv Sam L’article Ifanadina : 13 blessés dans la sortie de route d’un taxi-brousse est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Ifanadina : 13 blessés dans la sortie de route d’un taxi-brousse a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Avy amin’ny firenena rosianina: hotohanana ara-tsakafo ireo mpianatra 200.000 any atsimo
Hisitraka tohana ara-tsakafo ireo mpianatra any amin’ny faritra atsimo, izay anisan’ny manana olana ara-tsakafo sy fambolena. Avy amin’ny firenena rosianina ny fanampiana ary manodidina ny 200.000 ireo mpianatra hahazo tombony amin’izany.Ho fanampiana ireo mpianatra any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy, nanolotra tohana ara-tsakafo mitentina iray tapitrisa dolara ny firenena rosianina tamin’ny alalan’ny masoivohony miasa eto amintsika, i Stanislav Akhmedov. Mpianatra 200.000 amin’ireo sekoly ambaratonga fototra 800 any atsimo no hisitraka izany, ho amin’ity taom-pianarana 2020-2021 ity. Anisan’izany ireo distrika 11 any Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana, izay anisan’ny manana olana ara-tsakafo sy famokarana. 502 taonina eo ho eo ny sakafo hozaraina amin’ny mpianatra mandritra ny taona. Misy karazana legioma milanja 382 taonina sy menaka misy vitaminina milanja 120 taonina. Hifarimbona amin’ny fitsinjarana izany ny ekipan’ny fandaharanasa misahana ny sakafo (Pam).Samy hahazo ny anjarany avokoa ireo sekolim-panjakana amin’ny ambaratonga fototra rehetra any atsimo. Anisan’ny mandrisika ny ankizy hamonjy fianarana ny fisian’ny sakafo an-tsekoly. Voaporofo izany amin’ny fiakaran’ny faharisihan’ny ankizy mamonjy sekoly rehefa misy ny “cantine scolaire”. Voasokajy ao anatin’ny ankizy marefo ireo mpianatra any amin’ny faritra misy ny kere, anisan’ny hisitraka izao tohana ara-tsakafo manokana izao. Heverina hampiverina ny fifantohan’ny mpianatra amin’ny fianarana ny fisian’ny sakafo any an-tsekoly ary hanatsara ny voka-panadinana.Amin’izao fiandohan’ny taom-pianarana izao indrindra no nahatongavan’ny tohana ka heverina ho betsaka ny mpianatra hihazo ny sekoly.Tatiana AL’article Avy amin’ny firenena rosianina: hotohanana ara-tsakafo ireo mpianatra 200.000 any atsimo a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka amin’ny fanginany ny fadintseranana malagasy momba ilay “Raharaha volamena 73,5 kg” tratra tany Afrika Atsimo. Samy nitondra fanazavana momba iny raharaha iny ny tale jeneralin’ny fadintseranana, i Lainkana Zafivanona Ernest, sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Ny 31 desambra 2020 ihany, nampahafantatra ny fadintseranana malagasy ny any Afrika Atsimo amin’ny fisian’ny volamena 73,5 kg avy aty Madagasikara tratra ao aminy. Fiaramanidina manokana ny nitondra io volamena io avy any Toliara, ho any Afrika Atsimo, ary voalaza fa saika hitondra izany any Dubaï. “Satria 1 janoary voalohan’ny taona, ny 2 janoary, nitohy ny fanadihadiana, tsy mijanona eto Madagasikara ihany fa manao koa ny any Afrika Atsimo sy any Mali”, hoy ny tale jeneralin’ny ladoany, i Lainkana Zafivanona Ernest. Marihina aloha fa nisy taratasy hosoka hita amin’ny antontan-taratasy iray milaza fa avy any Mali io volamena io.Fa ny tena nasongadina ny fandikan-dalàna ao amin’ny fadintseranana, fandikan-dalàna faratampony ny tsy fanambarana ny entana hoentina, ny fanondranana antsokosoko; fandikan-dalàna faratampony ny varo-maizina tsy mampidi-bola ho an’ny fanjakana. Tsy nisy fepetra noraisin’ny fadintseranana noho ny tsy fisian’ny fanambarana tonga tany aminy, mialoha ny hamoahana ny entana. “Araka ny lalàna, tsy maintsy ampandrenesina, 24 ora mialoha ny hamoahana sy ny hampidirana entana, ny tompon’andraikitra. Tsy nisy izay fampilazana izay”, hoy ny tale jeneralin’ny ladoany. “Efa nomanina iny, ny tany Toliara koa, tsy nisy fepetra ara-dalàna noraisina”.Nametraka fitoriana voalohanyNoho ireo rehetra ireo, ny fadintseranana no nametraka fitoriana voalohany eny amin’ny Fitsarana miady amin’ny kolikoly (Pôle anti-corruption), sy nanondro ireo olona nahiahina. Ny fadintseranana ihany koa no nitazona ilay fiaramanidina nitondra volamena. Efa eo am-pelatanan’ny Fitsarana ny raharaha, ireo voatazona any Afrika Atsimo kosa, nahemotra amin’ny 1 febroary ny fitsarana azy ireo. Manampy ny fanjakana foibe ny fadintseranana amin’ny famerenana ireo volamena ireo. “Tsara ho fantatra fa izay volamena tratran’ny fadintseranana, apetraka any amin’ny Banky foibe”, hoy ny tale jeneralin’ny ladoany. R.MathieuL’article “Raharaha volamena 73,5 kg”: fandikan-dalàna faratampony amin’ny fadintseranana a été récupéré chez Newsmada.